Ogige Ndabere Acorn | Lọ Akwụkwọ Oakleigh na Early Early Intervention Center
Rachel Preston / Acorn Onyeisi Isi
Aclọ ọrụ Acorn dabere na saịtị abụọ; otu na Queenswell Infants School na Whetstone na otu na Colindale Primary School. Acorn na-abịa n'okpuru njikwa nke Oakleigh School & Early Years Intervention Center.
Ornlọ Ọrụ Acorn Assessment na-elekọta ụmụaka ụlọ akwụkwọ ọtaị nwere ọtụtụ Nkụzi Mmụta / Nkwarụ Pụrụ Iche (SEND). Ndị a gụnyere ụmụaka nwere ọnọdụ ahụike, nkwarụ anụ ahụ, nsogbu mmekọrịta mmadụ na ibe ya, mmebi nke isi, ọnọdụ autism na / ma ọ bụ nsogbu mmụta ndị ọzọ.
A na-enyocha mkpa ụmụaka ruo oge ụfọdụ, ebe ha na-anata ọtụtụ ịdọ aka ná ntị iji nyere ha aka inwe ọganihu na imezu ikike ha. Ntụle a na-aga n'ihu na-eme ka usoro nyocha nke Iwu kwadoro ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa ma na-enyere aka ịchọpụta ihe onwunwe ụmụaka ga-achọ na ntinye akwụkwọ agụmakwụkwọ ha ọzọ.
Childrenmụaka na-agbaso usoro ọmụmụ usoro ọmụmụ nke afọ nke mebiri ma mekwaa iji dabaa mkpa mmụta ha n'otu n'otu. N'akụkụ nke a ndị ọrụ na-emejuputa ebumnuche nke Okwu na Okwu Asụsụ, Physiotherapist na Occupational Therapist na-arụ ọrụ n'akụkụ ndị ọrụ Acorn n'oge dị iche iche n'izu.
Ndị nne na nna na-etinye aka na nhazi na nsonaazụ yana ndị ọrụ. Nwatakịrị ọ bụla nwere Atụmatụ Ọmụmụ Ihe Onwe Onye, nke a na-ahazi ya na ezinụlọ yana ndị ọkachamara; a na-enyocha ma melite nke a na etiti ọnwa atọ, ma ọ bụ n'usoro usoro nyocha, Health na Care Plan.
Anyị nwere ntinye aka site na Drama and Movement Therapist na / ma ọ bụ Onye Na-ahụ Maka Egwú Ndị nwere ike ịrụ ọrụ na ụmụaka ọ bụla ma ọ bụ kwado oge nne na nna na nwa na-eso nnabata nke ntinye aka na ọrụ ahụ. Na mgbakwunye na ụmụaka a ga-enwe ohere ịnweta ma ọ bụ ọdọ mmiri ọgwụ hydro-therapy nke dabere na Oakleigh School ma ọ bụ igwu mmiri na-egwu mmiri na ọdọ mmiri dị na mpaghara otu ugboro n'izu, ebe egwuregwu dị nro na ohere maka ebe dị egwu.
Anyị nwekwara Onye Ọrụ Na-enye Nkwado Ezinaụlọ bụ onye nwere ike ịleta ezinụlọ Acorn iji nyere ndị nne na nna na ndị nlekọta ndụmọdụ banyere nsogbu ọ bụla ezinụlọ nwere. Ndị nkuzi klaasị, yana nkwado onye isi na-enyere aka, ga-abụ ndị ọrụ mkpịsị ugodi maka ụmụaka nọ na Mmemme Nkwado Mbido, ma ọ bụrụ na ezinụlọ ha chọrọ.
Whomụaka na-abịa Acorn nwere ohere ịbịa ụbọchị ise n'izu maka oge elekere 3 (ma n'ụtụtụ ma ọ bụ n'ehihie), na-eme awa 15 nke ikike ụlọ akwụkwọ ọta akara. N'ihi nnukwu ọchịchọ maka ebe Acorn, anyị na-agba ụmụaka ume ịbịa nnọkọ 5 niile. Anyị ga-elebara ọnọdụ ezinụlọ dị iche iche anya; ihe a na-atụ anya ya bụ na nwatakịrị ọ bụla na-aga maka opekempe 3 nnọkọ kwa izu.
A gbara ndị nne na nna na ndị nlekọta ume ka ha gaa Acorn Assessment Center kacha nso n'ụlọ ha ma ọ bụrụ na ndị ọkachamara metụtara nwa ha na-eche na nke a nwere ike ịbụ ebe kwesịrị ekwesị ụlọ akwụkwọ. Nkọwa maka Acorn na-abịakarị site na ndị ọkachamara afọ mbụ. A na-atụle nnabata ndị a na ngalaba Acorn nnabata nke a na-eme n'oge opupu ihe ubi kwa afọ.
Acorn ga-enyekwa ndị ezinụlọ nkwado site na nnyefe nke ụlọ akwụkwọ n'afọ niile. Nzukọ ndị a ga-elekwasị anya n'akụkụ dị iche iche nke mmụta na mmepe, a ga-emepekwa ya maka nzaghachi nke ndị nne na nna na ndị nlekọta chọpụtara. Ha nwere ike ịgụnye 'nkwukọrịta gụnyere omume', 'ọzụzụ ụlọ mposi', 'ịhazi usoro', 'oge nke nwa anyị na ndị na-eto eto na-ehi ụra' na 'ụra'.
Iji nwetakwuo ihe ọmụma banyere Acorn Assessment Center, biko kpọtụrụ Rachel Preston, Onye na-enyere aka, na 020 8205 6393 (Acorn Colindale Office), 020 8445 2818 (Acorn Queenswell Office) ma ọ bụ 07827 993154.
Iwu nnabata Acorn - Septemba 2020